पछिल्ला अवधिहरूमा टोक्सिकोसिस
गर्भावस्थामा विलम्ब हुन्छ जुन विषाक्तोसिस, असामान्य छैन। यो लगभग 50-60% मामलाहरु मा देखिएको छ। ढिलो यो भनिन्छ किनभने यो 28 मा प्रकट हुन्छ, र महिलाको गर्भावस्थाको 30 हप्ता पनि।
ढिलाइमा विषाक्तताको मुख्य लक्षणहरू के हो?
सामान्यतया गर्भवती गर्भावस्थाको साथमा विषाक्त रोगको लक्षण, एक नियमको रूपमा, कम छन्। यसमा समावेश छ:
हात र खुट्टामा edema ;
एक निरंतर, गुजारा मतली;
क्लिनिक, यस रोगको उपस्थिति पुष्टि भएको छ, उदाहरणका लागि, मूत्रमा प्रोटीनको उपस्थिति र उत्तेजना प्रणालीको सामान्य कार्यको उल्लङ्घन गरेर।
धेरै गर्भवती महिलाहरु, थाहा छैन कि विषाणु को विलम्ब कसरी प्रकट हुन्छ, अक्सर यो अन्य रोगहरु संग भ्रमित।
यसको विकासमा महिलाले निरन्तर सिरदर्द अनुभव गर्दछ जुन प्रायः प्रायः एक पिडाको साथ हुन्छ, आँखाहरु भन्दा पहिले "मक्खी" को चमक, कमजोरी। उनीहरूले रक्तचापमा स्पेसोडिक परिवर्तनहरूको कारण देखाइएका छन्, जुन विगतको गर्भावस्थामा विषाक्त रोगमा धेरै सामान्य हुन्छ।
गर्भावस्थाको अन्त्यमा रोगको कारण के हो?
सामान्य गर्भावस्था संग विषाक्तता को विषाक्तता को मुख्य कारणहरु वायरल संक्रमणहरु जस्तै, केहि अंगहरु र प्रणालिहरु को पुरानो रोगहरु जस्तै रोगहरू छन्। यस अवस्थामा, एक को लागी निरन्तर नींद, overwork र गर्भवती महिला को जीवन मा तनावपूर्ण स्थितीहरु को अभाव मा ध्यान दिन को लागी असफल हुन सक्दैन।
रोग, ठूलो मात्रामा द्रवको खपत, अंततः edema को विकास को नेतृत्व गर्दछ, जो देर अवधि मा विषाक्तता को मुख्य अभिव्यक्ति हो।
विषाक्त रोगको असर के हो?
गर्भवती महिलाहरू, उनीहरूलाई विषाक्त विषाक्तताको लागि के खतरनाक कुरा थाह छैन, प्राय: यो उचित ध्यान नदिनुहोस्। यो अवस्था अक्सर पेसिसे को उल्लङ्घनको कारण हुन्छ, जसले अन्ततः भ्रूणलाई असर गर्छ। विशेष गरी, भ्रूण को ओक्सीजन भुखार, उनको तंत्रिका गतिविधि को प्रभावित गर्दछ।
बालबालिकाको इन्टरट्रिभाइनिन विकास
सफा बिना प्रारम्भिक मितिमा विविधता
गर्भावस्थाको बेला पेट कसरी बढ्छ?
Severe toxicosis - के गर्न को लागी?
हृदय भ्रूणमा हराउन कहिले सुरु हुन्छ?
गर्भपतन गर्नु अघि मतभेद
पीडा रोगी मृत्यु
अगाडिको भित्तामा कोरियो - के यो छ?
भ्रूण 1 डिग्रीको हाइपोटोरोफी
मृतकको पछि किन बच्चालाई नामकरण गर्न सक्नुहुन्न?
जुत्ता र जुत्ताहरू कसरी हुन्छन्?
के यो सम्भव छ गर्भवती मा अन्वेषण?
गर्भावस्थाको 20 हप्ता - बच्चा र मेरी आमाको भावना संग पहिलो सम्पर्क
40 वर्ष पछि बालबालिका
महिला संभोगका प्रकारहरू
190 माथिका पागलपन
वजन पैर गुमाउन के गर्नु पर्छ?
स्टेक रोस्टेङ को डिग्री
मोटो महिलाहरूका लागि साराफान्स - सबैभन्दा सुन्दर र स्टाइलिश मोडेल
बलबिनिनी शरद ऋतु-जाडो 2014-2015
प्याजको उपयोगी गुणहरू
छोटो स्कर्ट 2014
अलेक्जेंड्रा गार्डन पार्क
खाना खानेको लागि उच्च कुर्सियोंको दर्जा
कर्पोरेटको लागि मजेदार प्रतियोगिता
Organza फूलहरू आफ्नै हातले
त्यहाँ कुनै घर हो?
फलानेप्प्सिस - प्रजनन
नयाँ वर्षको लागि कार उत्साहीका लागि उपहार
कुखुराले के जस्तो देखिन्छ?